Imfama / Wangcwatywa Via - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Vias, oko kukuthi, ubhedu ngumfanekiswana imingxuma, kudlala indima ephambili unxulumano phakathi maleko kwi ibhodi wesiphaluka eprintiweyo. Ngokubanzi, vias e PCBs nga ihlelwa ezi ndidi zilandelayo: nge-umngxuma nge, eyimfama nge baza bamngcwaba nge. vias Imfama / kungcwatywa ukuba lisetyenziswa ngokuthe SMT (umphezulu Mount Technology) nje ukuba ukubuyisela lobubi vias nge-umngxuma.
Blind nge idibanisa umaleko omnye zangaphandle ne enye okanye ngaphezulu maleko ngaphakathi kwi ibhodi yesekethe eziprintiweyo, onoxanduva unxulumano phakathi maleko phezulu kwaye izaleko yangaphakathi okanye umaleko ezantsi kwaye izaleko ngaphakathi.
vias Wangcwatywa ukuqhagamshela maleko kuphela ngaphakathi ngaphakathi ibhodi yesekethe ziprintwe ukuze ingabonakali nje umphandle xa PCB ekubeni ngaphakathi 'kungcwatywa ".
vias Imfama / kungcwatywa ahambelane kuphuculo lexinene neebhodi ngaphandle kwesidingo ukwandisa inani lamanqanaba okanye ubungakanani ibhodi. Ngoko ke, vias abaziimfama / kungcwatywa akholisa sasisebenza PCBs HDI. Beka ngenye indlela, vias abaziimfama / kungcwatywa inokucholwa xa unesifo imfuneko olwandeleyo nandawo yaneleyo kwaye nge-umngxuma les.
Ngenxa yolwazi lwethu ngaphezu kweminyaka engama-20 kweli candelo, PCB Wonderful ligxininisa PCBs lokuvelisa kunye vias abangaboniyo / kungcwatywa. Zombini iinjineli kunye necandelo lokuvelisa izixhobo ukusuka PCB Wonderful ukuqinisekisa izakhono zethu ngokupheleleyo ukuhlangabezana neemfuno iimfama / kungcwatywa ngethekhinoloji.
Ukuza kuthi ga ngoku, siye ukuba ikwazi ukubonelela bomatshini azakwembiwa kunye laser seligrunjiwe izisombululo. Xa kuziwa ukubhola ngomatshini, nge Amanzi ububanzi ukusuka 0.2mm ukuya 0.4mm ngelixa 0.1mm ukuba laser wokugrumba.
Ngokusekelwe iimfuno iprojekthi wakho, ungakhetha ngokumba ngobubanzi olungqamelanayo kwi izinto ekuthini i locaphulo yethutyana ukuze PCBs. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga vias abangaboniyo / wangcwatywa, sihlale njalo ziyafumaneka wonderful@wonderfulpcb.com .